एक शिक्षिकाले गरिन् आफ्नै छात्रसँग विवाह !!! ……. सुहागरातको साथ विधवा भएको नाटक पनि रचिन् !!! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०७, २०७७ समय: १२:२५:३९
जालंधर स्थित स्कूलको एक शिक्षिकाले आफ्नै एक १३ वर्षिय विद्यार्थीसँग विवाह गरेकी छिन् । शहरको एउटा वस्ति बावाखेल इलाकामा यो घटना भएको हो । उक्त शिक्षिकाको विवाहमा विभिन्न अवरोध आई ढिला हुन गइरहेको थियो र उक्त शिक्षिका अन्धविश्वासमा लागेर विवाह गरेको वताईएको छ । उक्त शिक्षिकालाई यसरी विवाह गर्दा आफुमा भएको मांगलिक दोष मूक्त हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास थियो । नावालिक विद्यार्थीको तर्फवाट उसको परिवारले पुलिसमा कम्प्लेन दर्ता गराएको छ ।
कम्प्लेनमा भनिएको छ की उक्त शिक्षिकाले ट्यूशनको लोभ देखाएर ६ दिन सम्म आफ्नो घरमा राखी विवाह गरेकी थिईन् । उक्त विवाह प्रतिकात्मक भएको वताईएको छ । विद्यार्थीको अभिभावक आर्थिक दृष्टिले कमजोर थियो र शिक्षिकाले विद्यार्थिको पढाईमा मेहनत गर्नको लागि केही दिन आफ्नो घरमा छोड्न भनिएको थियो र अभिभावक पनि तैयार भएका थिए ।
प्रहरीमा दर्ता भएको आरोपमा विद्यार्थिलाई ६ दिनसम्म घरमा राखी विवाहको सवै रसम पुरा गरिएको र हल्दी मेहेन्दी पनि लगाएको र सुहागरातको नाटक पनि गरिएको जनार्ईएको छ । त्यस पछि पण्डितले भने वमोजिम चुडी फुटाएर विधवा वनेको ढोंग पनि रचार्ईएको थियो । त्यस पछि वकाइदा एक शोकसभाको आयोजना पनि गरिएको थियो ।
विवाहको रश्म पुरा भए पछि भने त्यो विद्यार्थिलाई घर पठाईएको थियो । त्यो अभिभावकले आफ्नो वच्चालाई उक्त शिक्षिकाको घरमा काममा पनि लगाएको आरोप पनि लगाईएको छ ।
ति आरोपित शिक्षिका र उसलाई सल्लाह दिने पण्डित पुलिसथाना पुगेर यो आरोपलाई रफादफा गर्ने कोशिश पनि गरेका थिए र अभिभावकले कम्प्लेन फिर्ता पनि लिएको थियो । तर वरिष्ठ पुलिस अधिकारीहरुले यो कुरा थाहा पाए पछि फेरी केस दर्ता भएको छ र जाँचवुझ गर्ने आदेश दिएको छ ।
जालंधरको डीएसपी गुरमीत सिंह भन्नुहुन्छ यो प्रतिकात्मक विवाह भए पनि अभिभावकको सहमति विना विद्यार्थिलाई गलत तरिकाले घरमा रोकि राख्नु अपराध हो । प्रतिकात्मक विवाह भए पनि एउटा नावालिग सँग विवाह रचाउनु गैर कानुनी हो ।
पुलिसको छानविनमा शिक्षिका र उसको घरवालाले धेरै समयसम्म उक्त शिक्षिकाको विवाह नभएको र पण्डितलाई वताउँदा शिक्षिकाको मांगलिक दोष भएकोले पहिला प्रतिकात्मक विवाह गराई दोष हटाउनु पर्ने भनिएको थियो । यसरी ति शिक्षिका र उसको परिवार पण्डितको सल्लाहमा विश्वास गर्दा समस्यामा परेका छन् ।